Pebble Beach Systems dia manambara ny vokatra ara-bola ho an'ny antsasaky ny taona voalohany amin'ny 2019 - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » Pebble Beach Systems dia manambara ny vokatra ara-bola ho an'ny antsasaky ny taona voalohany an'ny 2019
Pebble Beach Systems dia manambara ny vokatra ara-bola ho an'ny antsasaky ny taona voalohany an'ny 2019
Weybridge, UK, Septambra 10th, 2019 - Vatokilonjy Beach Systems, famokarana automatique, fitantanana ny votoaty ary manam-pahaizana manokana momba ny fantsona mikambana dia namoaka valiny tena tsara nandritra ny enim-bolana voalohany 2019 androany.
Ny orinasa dia nitatitra ny vola miditra amin'ny £ 5.6m, fitomboana 51% raha oharina amin'ny tarehimarika 2018 tamin'ny Janoary sy jona, miaraka amin'ny fiakaran'ny 23% ny sandan'ny baiko voaray mandritra ny fotoana mitovy. Izy io dia mitatitra alohan'ny tomban'ny hetra amin'ny £ 0.7m, raha ampitahaina amin'ny fahaverezan'ny £ 0.9m tao anatin'ny enim-bolana voalohany an'ny 2018, ary fitomboana lehibe tao amin'ny EBITDA novaina tamin'ny £ 0.6m ka £ 2.0m.
Nilaza ny Tale Jeneralin'ny Pebble Peter Mayhead fa "mirehareha ny miditra amin'ny seho IBC aho amin'ity taona ity amin'ny valiny betsaka. Mazava amiko fa rehefa avy nandamina ny fahombiazan'ny fanarahan-dia nandritra ny roa taona lasa, dia ekena ho isan'ny iray amin'ireo mpivarotra manokana tsy miankina mijanona ao amin'ny playout isika. Amin'izao tsenam-barotra mikorontana izao, dia mitombo isika ary manangona tombony lehibe izay ahafahantsika manao famatsiam-bola amin'ny R&D. Izahay dia kely sy malemy ary apetraka manokana ary manampy amin'ny famaritana ny ho avin'ity faritra manan-danja amin'ny orinasam-pifandraisana ity. ”
John Varney, filoha mpanatanteraka tsy Vatokilonjy Beach Systems Group plc, nilaza hoe:
"Mampahery be izahay miaraka amin'ny valiny ho an'ny antsasaky ny 2019 voalohany. Tamin'ny fiandohan'ny 2018 dia nametraka drafitra iray mahery vaika ny birao hihodinan'ny orinasa. Ny asa natao nandritra ny 2018 dia ilaina sy natao an-tsipiriany saingy, toy ny mahazatra amin'ny toe-javatra mihodina, ny isa vokarintsika tamin'ny faran'ny taona, na mampahery aza dia tsy hita taratra ny haavon'ny fivoarantsika. Tena mahafaly tokoa ny afaka mitatitra valiny mahavariana toy izany ho an'ny antsasaky ny 2019 voalohany. Taratasy lehibe ireo ho an'ny kalitao sy ny asan'ny olona ao anatin'ny orinasa. Raha ny ampahany voalohany amin'ny fiolanana dia feno, ny tsena izay iasanay dia mihetsika haingana sy mifaninana ary na dia nanatsara ny lazantsika sy ny toerana misy ny tsenantsika aza isika mbola betsaka.
Ny fijerena ny tapany faharoa amin'ny 2019 ary mihoatra ny zava-dehibe ataontsika dia ny fanohizana ny fanatsarana ny fanatsarana ny fifanakalozana ara-barotra atolotra ao amin'ny 2018 ary manararaotra ireo fotoana atolotry ny fiovana eo amin'ny tsenan'ny fampitana. ”
Vatokilonjy Beach Systems dia hiseho amin'ny Stand 8.B68 ao amin'ny IBC, ary handray anjara amin'ny IP Showcase ao amin'ny efitrano E106 / 107 ao amin'ny RAI. Ny antsipiriany momba ny tatitra momba ny antsasaky ny taona dia mety ho hita Eto.
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC TVU Networks Video injeniera	2019-09-10
Previous: Miseho ny fahitalavitra mampiseho ny tamba-jotra farany ambany indrindra miaraka amin'ireo kianja filalaovana Esports avo lenta amin'ny IBC 2019
Next: Core Post dia manolotra ny Sky One's Brassic ao HDR miaraka amin'ny DaVinci Resolve